Fifanakalozam-bola any Sri Lanka. Banks. " Journey-Assist - tahan'ny fifanakalozana ankehitriny
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fifanakalozana fifanakalozana vola any Sri Lanka. Banks.
Fifanakalozana fifanakalozana amin'ny vola any Sri Lanka
Vola any Sri Lanka
Inona ny vola raisina any Sri Lanka
Vola karama plastika any Sri Lanka
Ny vola nasionaly any Sri Lanka dia ny Rupee Sri Lankan (na "Lankan" fotsiny). Ho an'ny fanondroana azy dia karazany roa ny fitambaran'ny litera ampiasaina - Rs sy LKR. Milamina ny tahan'ny fifanakalozana Rupee Sri Lankey, ny tsy fisian'ny fiovaovana maranitra sy matetika mifandraika amin'ireo vola lehibe manerantany.
Rupees Sri Lankan
Sintona ao Sri Lanka
Aza adino fa lavitra ny volavolan-dalàna ny volavolan-dalàna.
1 Sri Lankan rupee dia nosarahina tamin'ny fomba ofisialy 100 cents, fa raha ny marina ny cents any Sri Lanka dia tsy ampiasaina intsony noho ny fisondrotam-bidim-piainana. Amin'ny fizaram-pefy dia misy anaram-boninahitra 10, 20, 50, 100, 500, 1, 000 ary 2 rupee, ary koa vola madinika 000, 5, 000 ary 1 rupee. Ny volan'ny 2 sy 5 cents dia tsy nisintona tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fihetsehana, fa tena tsy fahita firy.
Ho fanampin'ny vola madinika, misy vola an-tsokosoko any Sri Lanka izay natokana ho an'ireo hetsika isan-karazany, daty, sns Raha sendra tampoka izany ianao, dia mitombina ny mitandrina izany ho an'ny tenanao, satria afaka manana karazana sandan'ny numismatic izy io.
Avy amin'ny vola hoentina any Sri Lanka dia mitombina ny dolara amerikana sy ny euro. (Azonao atao ny mianatra bebe kokoa momba ny fitsipika momba ny fanafarana vola any Sri Lanka. eto.) Tsy misy fahasamihafana hita eo amin'ny tombony azo amin'ny fifanakalozana ny tahan'ny fifanakalozana dolara sy euros. Samy manaiky daholo na ny vola lehibe indrindra eto Sri Lanka.
Amin'ny alàlan'ny lalàna, ny vola mandoa an'ity firenena ity na aiza na aiza dia tsy misy afa-tsy ny rupees Sri Lankanes. Na izany aza, amin'ny fampiharana dia matetika no tsinontsinoavina. Any amin'ny hotely maro, ohatra, ianao dia afaka mandoa vola dolara (tsy manakalo izany). Fa amin'ity tranga ity, ny tahan'ny hiova ny vidiny amin'ny rupees amin'ny dolaranao dia tsy mahasoa kokoa noho ny tahan'ny hafa any amin'ny fifanakalozana amin'ny toerana eo an-toerana. Matetika azo atao ny mandoa vola amina dolara ao anaty fitoeram-barotra, amin'ny kafe iray na amin'ny fivarotana kely, fa eo kosa ny tahan'ny hafa dia vao miharatsy kokoa.
Ny dolara any Sri Lanka androany
Mpanova Vola Ny taham-panakalozana hatrany hatrany!
Misy toerana maro ahafahanao mifanakalo vola amin'ity firenena ity. Ny fifanakalozana dia atao any amin'ny sampana any amin'ny banky eo an-toerana, amin'ireo mpivarotra miavaka, amin'ny fivarotana firavaka ary amin'ny fivarotana souvenir. Misy toerana ampy atakalo vola amina tanàna lehibe na kely kokoa sy any amin'ireo faritra mpizahatany. Saingy, any amin'ny toerana lavitra tsy dia malaza amin'ny mpizahatany, dia mety ho sarotra ny hahita fifanakalozana. Ka alohan'ny handehananao any amin'ny toerana toy izany dia tokony hifanakalo vola mialoha ianao.
Bank any Sri Lanka
Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ny banky any Sri Lanka. Matetika izy ireo dia misokatra amin'ny 9 ora, ary mikatona - ny sasany amin'ny 13, ny sasany amin'ny 14, ary ny sasany amin'ny 15. Mihidy ny banky isaky ny asabotsy sy alahady, ary koa amin'ny fialantsasatra lehibe. Rehefa mifanakalo vola any amin'ny banky ianao dia misy fanamarinana izay omenao, manidina avy any amin'ny seranam-piara-manidina any Colombo, averina ny vola avelanao amin'ny taha ofisialy. Izany dia azo atao ao amin'ny sampana banky miorina eo amin'ny seranam-piaramanidina.
Ho fanampin'ny dolara sy ny euro, ny birao fifanakalozana amin'ity firenena ity dia matetika manaiky ny vola avy any amin'ny firenena hafa any Azia, ohatra, ny Baht Thailand. Mora ho an'izay mikasa hitsidika firenena Azia Atsinanana ao anatin'ny fitsidihana iray. Ny rubles rosiana any Sri Lanka ihany koa dia ekena amin'ny toerana maro, saingy ny tahan'ny dia tsy hita ho tombony.
"Mpanakalo vola" any Sri Lanka
Eny an-dalambe dia afaka mahita ny mpivarotra vola tsy miankina ianao izay manandrana mitroatra mpizahatany miaraka amin'ny làlana somary manintona kokoa noho ny banky sy ny seranam-piaramanidina. Saingy tena kivy ny fifandraisan'ireo olona ireo, satria mazàna mitady vola izy ireo. Any amin'ny seranam-piara-manidina, afaka miova soa aman-tsara ny vola na dia maro be aza. Eny tokoa, tsy dia misy dikany ny fahasamihafan'ny fifanakalozana eo anelanelan'ny teboka eo amin'ny seranam-piaramanidina sy ny sampana banky izay misy ny tanàna sy ny fifanakalozana amin'ny olona tsirairay (eo amin'ny seranam-piaramanidina dia somary ratsy ihany ny tahan'ny).
Endrika fifanakalozana fifanakalozana amin'ny vola any Sri Lanka
50 sy 100 dolara dolara dia matetika no ekena amin'ny vidiny kely kokoa noho ny volavolan-dalàna kely indrindra amin'ny vola amerikana.
Indraindray azonao atao aza ny mifampiraharaha amin'ny mpivarotra tsy miovaova (toy ny eny an-tsena), manandrana hahatratra taha ambony kokoa ho anao. Matetika ianao no sendra fanambarana toy ny hoe "androany ny tarehintsika dia ratsy kokoa noho ny omaly, satria nilatsaka ho an'ny andro ny dolara" ary ny hadalana mitovy amin'izany. Fa mazàna, aorian'ny fifampiraharahana kely dia azo atao ny mifanakalo amin'ny taha ambony na kely kokoa.
Mba ampifamadiho ho any dolara ny Rupee Sri Lankan
Ny fifanakalozana mifamadika amin'ny Sri Lankan rupees amin'ny dolara na euros dia azo atao ao amin'ny seranam-piaramanidina mandritra ny fialana. Na izany aza, izany dia tsy maintsy mitaky fisavana momba ny fifanakalozana tany am-boalohany, izay navoaka irery amin'ny teboka ofisialy (seranam-piaramanidina, sampana banky). Ny mpivarotra olona sasany dia miasa tsy ofisialy ary tsy mamoaka fisavana. Ary mazava ho azy, mazava ho azy, tsy hampiala azy ny làlana.
Tokony ho tsaroana ihany koa fa ny fividianan-dalàna ao an-toerana dia manana fahefa-mividy kely. Noho io antony io (farafaharatsiny mba hitehirizana ny habetsaky ny paosy) dia tsy tokony hanolo ny fotoana betsaka avy hatrany. Tsara kokoa ny hanao fifanakalozana fifanakalozana raha ilaina izany.
Ny fitsirihana mpandeha any Sri Lanka
Any Sri Lanka, ny fifanakalozana fifanakalozana ny mpandehandeha ary ny kajikajy amin'izy ireo dia azo atao. Azonao atao ny miova amin'ny sampana banky ihany. Fa mila mandinika ianao fa amin'ireo tanàna kely izay tsy dia malaza amin'ny mpizaha tany, na ny banky aza tsy mifanakalo pirinty mpandeha akory. Ka tsara kokoa ny manao izany mialoha ny any amin'ireo tanàn-dehibe.
Karatra plastika any Sri Lanka
Ny toe-javatra amin'ny fampiasana karatra banky eto amin'ity firenena ity dia tsy ny tsara indrindra. Izy ireo dia azo aloa saika amin'ny magazay lehibe sy any amin'ny hotely lehibe indrindra (ary na dia izany aza - tsy izy rehetra). Misy ny milina ATM amin'ny toerana fizahan-tany rehetra, ary tsy izany ihany. Na izany aza, maro ny ATM misy fetra amin'ny vola azo arotsaka avy amin'ny Visa na Mastercard indray mandeha. Matetika dia $ 1 fotsiny.
Any Sri Lanka (na any amin'ny faritra mpizahatany aza) dia tena sarotra ny mahita trano fisakafoanana, kafe, fivarotana (afa-tsy amin'ny tsenambarotra lehibe) na trano fandraisam-bahiny izay ahafahanao mandoa karatra. Hatreto dia noraisina saika na aiza na aiza eto amin'ity firenena ity ny vola.
Ny loza ateraky ny fampiasana karatra plastika any Sri Lanka
Fotoana iray tsy mahafinaritra loatra amin'ny fampiasana karatra any Sri Lanka dia ny banky maro (anisan'izany ny rosianina) no manasokajy an'io firenena io ho vondrona misy risika be dia be amin'ny resaka fiaraha-miasa karatra. Alohan'ny handaozana dia ilaina ny mampitandrina ny banky izay karatra ampiasainao hampiasaina any Sri Lanka fa hampiasainao amin'ity firenena ity ianao. Raha tsy izany, azo inoana fa manakana ny karatrao ny bankinao aorian'ny fisintahan'ny vola voalohany amin'ny ATM.
Ampidiro sy manondrana vola avy any Sri Lanka
Voarara ny manafatra (na aiza na aiza) ny rupees any India sy Pakistan ho any Sri Lanka. Ny karazana volam-pirenena hafa dia azo ampidirina amin'ity firenena ity nefa tsy misy famerana, saingy ny habetsaky ny dolara mihoatra ny 15 isaky ny olona (anisan'izany ny fitsangatsanganana mpitety dia tsy maintsy ambara). $ 000 ka hatramin'ny $ 5 dia tsy maintsy ambara raha tsy mikasa ny haka izany any Sri Lanka ianao.
Tsy fomban-drazana tsy maintsy atao eto ny miforitra. Fa ny mpiasan'ny hotely sy ny mpandroso sakafo ao amin'ny cafe dia hanaiky am-pifaliana 50-100 rupees fanampiny ary ho feno fankasitrahana. Raha ny fanazavana, indraindray ny mponina ao an-toerana dia mangataka vola amin'ireo mpizahatany na dia resaka fotsiny aza. Saingy mahazatra kokoa ny faritra mandroso ny fizahan-tany.
Azonao atao ny misintona mpamily fiarakaretsaka iray (200-400 rupees), mpitari-tafika (100-500 rupees) na mpitari-dalana manokana (1000 rupees).
Lazao ahy, azafady, raha fantatrao.
Misy ATM ve any Tangalle?